Baro dhammaan qarsoodiga cirka SkySafari ee loogu talagalay Mac | Waxaan ka socdaa mac
Baro dhammaan sirta cirka SkySafari ee loogu talagalay Mac
Markaynu cirka eegno habeen cad ma yeelan karno dareemo kale oo aan ahayn tan baaxadda weyn. Halkaas oo aan si dhib yar ku aragno dhawr dhibcood iyo dayax gacmeed aan ugu yeerno Dayaxa, a xaddi aad u tiro badan oo ah waxyaabo aan caadi ahaynLaga soo bilaabo xiddigaha iyo meerayaasha ilaa majaajillada, dayax gacmeedyada, nebulae iyo, dabcan, sidoo kale canaasiir ka timaadda natiijada aadanaha, sida dayax gacmeedyada macmalka ah.
cunt SkySafari 5 u Mac waad awoodaa wax walba ka baro cirka iyo cirkaama. Kani waa casriyeyntii shanaad ee weyneyd ee codsigan cilmiga xiddigiska cajiibka ah, oo ku habboon qof kasta oo doonaya inuu barto waxa indhahooda ka baxsan qaab asal ah, is dhexgal iyo xiiso leh. Sidoo kale, hadda haddii aad deg degto waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho qiimo badhkiis.
SkySafari 5 ee loogu talagalay Mac
SkySafari 5 waa codsi lama filaan ah oo cilmiga xiddigiska ah kaas oo aad ku awoodi doontid inaad si qoto dheer u ogaatid wax kasta oo cirka ku qarsoon shaashadda Mac-gaaga, iyo wixii ka sarreeya, hab ka duwan oo madadaalo leh, oo leh macluumaad badan iyo, guud ahaan, Cajiib waayo-aragnimo.
Qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee SkySafari 5 loogu talagalay Mac:
Waxaa ku jira macluumaadka in ka badan 120.000 xiddigood iyo in kabadan 200 oo xidigood, nebulae iyo galaxies, iyo waliba meerayaasha iyo dayaxyadooda, xiddigta xiddiglayaasha, majaajilladaha, dayax gacmeedyada iyo kuwa kaloo badan.
Dhammaan macluumaadka waxaa lagu kaydiyaa barnaamijka sidaas darteed, markii la soo dejiyo, horayba loo soo dejiyey uma baahnid internet.
Waxaad awoodi kartaa arag indha madoobaadka ee la soo dhaafay iyo mustaqbalka.
Tijaabinta qubeyska meteor, gudbinta majaajiladaha, iyo xitaa jilidda cirka habeen kasta meel kasta oo Dunida ah sanado badan oo la soo dhaafay ama mustaqbalka.
Ka dhex maro boqolaal sharaxaad walxaha, sawirrada xiddigiska iyo sawirrada dayax gacmeedyada NASA.
Si faahfaahsan u ogow Saldhigga Hawada Caalamiga ah (ISS).
Hel ogeysiisyada marka ISS iyo dayax gacmeedyada kale ee waaweyn ay kor maraan.
Isdhexgalka Khariidadaha kana yimid Apple.
Y badano más.
SkySafari 5 waxay leedahay qiimo caadi ah 10,99 euro si kastaba ha ahaatee hadda waxaad ku heli kartaa qiime nus ah. Laakiin xusuusnow in dalabku yahay mid wakhti go’an ah kuna dhammaan kara wakhti kasta. Sidaa darteed, haddii aad xiisaynayso, waxaan kugula talinayaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u soo degsato, si aad uga faa'iideysato sicir-dhimista. Xusuusnow in, haddii aysan ugu dambeyntii ahayn sidaad jeceshahay, waxaad codsan kartaa lacag celin oo dib loogu soo celin karaa lacagtaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Baro dhammaan sirta cirka SkySafari ee loogu talagalay Mac
Laga bilaabo 1 ilaa 3 maalmood. Waqtiyada rarka ee AirPods ayaa mar kale hoos u dhacaya
Yoink for mac hadda wuxuu ku darayaa taageerada sabuuradda